ကဏ္ဍများ – Page 47 – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တကမ္ဘာလုံး အသုံးပြုနိုင်ရေး WHO အစီအစဉ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ပါဝင်
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နဲ့အတူအိပ်ပါက စိုးရိမ်ဖွယ် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ကျရောက်စေနိုင်
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ မွေးမြူထားတာ စိတ်ပျော်ရွှင် အပန်းပြေစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ မိမိအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ တခါတရံ အိပ်ခန်းမှာ ထားချင်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာတွေ ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးဖြစ်ဖြစ်၊ ကြောင်ဖြစ်ဖြစ် အိပ်ခန်းထဲ ပေးနေပါက စိုးရိမ်ဖွယ် ကျန်းမာရေးပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်မှာတွေ့ရတဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ သက်ရှိဇီဝအဖွဲ့အစည်းတွေ မတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားနည်းသူ တွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ မကြာခဏဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးနောက်‬ မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ်
သင် ဒါတွေ သိပါသလား။ ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆင်ခြင်ပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရော၊ မိသားစု နှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကို လည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါ …. ။
(၁) ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။
တစ်နေ့တာလုံး ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ သိထားရမယ့် အချက်များ
သင်ဟာ အလုပ်မှာ တစ်နေ့လုံးနီးပါး ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသူဆိုရင်တော့ သင့်မျက်လုံးအတွက် ဂရုစိုက်ပေးရမယ့် အချက်လေးတွေ ရှိလာပါပြီ။ ဒီအချက်ကလေးတွေကို ဂရုမပြုပဲ ကွန်ပျူတာရှေ့ မနားမနေ အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံးအားနည်းလာမှာဖြစ်ပြီး၊ မျက်ရည်ပူကျတာမျိုး၊ ခေါင်းကိုက်တာမျိုး စတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ခံစားလာရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ခုပြောပြပေးမယ့် အချက်ကလေးတွေ ကို သေချာလိုက်နာ လုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါအတွက် သိသင့်တဲ့ အရေးကြီး လက္ခဏာသုံးရပ်
ခါတိုင်းအောင့် နေကြ ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ရင်ဘတ်အောင့် နေပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ် အတွင်း သက်သာ သွားခဲ့ရင် နှလုံး ရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ် အောင့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာ အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်တွေ အစာမျိုပြွန်ကို ဆန်တက်တာကြောင့် ရင်ပူတာပါ။ ရင်ဘတ် အောင့်တာ တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာပြီး အနည်းဆုံး မိနစ် အနည်းငယ်ခန့်ထိ မပျောက်မှသာ နှလုံးရောဂါ အတွက် စိုးရိမ်ရမှာပါ။
ရေခဲသေတ္တာမှာ ထည့်သိမ်းမထားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၆) မျိုး
ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးသူအများစုဟာ အစားအသောက် အညွှန်း အမှတ်အသား ဖတ်တဲ့အခါ လွဲချော်တတ်ကြပါတယ်။ “refrigerate after opening” ‘ဖွင့်ဖောက်ပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာမှာ ထည့်ရန်’ လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံနှိပ်စာလုံး ထင်းထင်းလေးကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘဲ အစားအသောက်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသာ ထည့်သိမ်းလေ့ရှိကာ ဒါဟာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပုပ်သိုးပျက်စီး စေတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ရေခဲသေတ္တာတွင် သိမ်းဆည်းရန်” ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားပါရှိသည့်တိုင် ဘယ်တော့မှ ထည့်သိမ်းမထားသင့် အစားအသောက် (၆) မျိုးက. . .
ပြောင်းဖူးကို အရသာပိုထူးအောင် ပြုတ်စားကြည့်ချင်ရင်
ဒီလိုရာသီမှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပြောင်းဖူးထက် စားကောင်းတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ပြောင်းဖူးကို ပြုတ်စားဖို့ အတွက် အရသာ ပိုမို ထူးခြားကောင်းမွန်အောင် ချက်နည်းပြုတ်နည်း အသစ်အသစ်တွေနဲ့ လူတွေ အမြဲ ဆန်းသစ် တတ်ကြပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပြုတ်ကို နောက်တစ်ဆင့် ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်အောင် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီး လူတိုင်း လက်ဖျားလောက်စရာ ဖြစ်သွားစေချင်ရင်တော့ ရေပွက်ပွက်ဆူပြီးတာနဲ့ အိုးထဲ ဒီပစ္စည်းနှစ်မျိုး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
အစာစားပြီးနောက် မပြုလုပ်သင့်သော အန္တရာယ်ရှိအပြုအမူများ
အစာစားသောက်ခြင်းဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဟာရဓါတ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်သော နည်းလမ်းဖြစ် တာကြောင့် ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အစား ကောင်းတွေ ၊ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှ စားနေပေမယ့် တချို့သော အပြုအမူ အမှားတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကောင်း အကျိုး မဖြစ်ထွန်းတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အစာစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ အပြုအမူ (၇)ချက်ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အသည်း ရောဂါများ အတွက် အသုံးပြုသင့်သော ဆေးပင်များ (မုန်လာဥပင်)
ယခုတစ်ပတ်တွင် အသည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုရန် ရေးသားတင်ပြလိုသော အပင်မှာ မုန်လာဥပင်ဖြစ်၏။ မုန်လာဥပင် ဆိုလျှင် တိုင်းရင်း ဆေးပညာရှင်များ သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိဘပြည်သူများ သိနိုင်မည်ဖြစ်၏။ မုန်လာပင်သည် အရွက်၊ ဥနှင့် အမြစ်တို့ကို ဟင်းလျာအဖြစ် ချက်ပြုတ် စားသောက်ရသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း မုန်လာဥပင်မှာ ဆောင်းရာသီတွင် လှိုင်လှိုင်ပေါ်၏။
သင့်စွမ်းအား တိုးစေဖို့ ဒါတွေ စားပါ
နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝမှာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖိအားအမျိုးမျိုးကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအားကို လျော့နည်းစေပါ တယ်။ ဒီအစားအစာတွေက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအား တိုးမြင့်စေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအားနည်းပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အောက်စီဂျင် ပြတ်လပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်ရွက်မှာ သံဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အောက်စီဂျင်ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိမှုကို ကူညီပေးပြီး စွမ်းအားမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
HIV ပျောက်ကင်းရန် ကုသမယ့် ဆေးပညာ တွေ့ရှိရန် နီးစပ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Temple University မှ ဆေးပညာ သုတေသန ပညာရှင်များဟာ HIV AIDS ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်မ့် နည်းပညာ တစ်မျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းတွေ့ရှိမှုဟာ ရောဂါ ပျောက်အောင် ကုသမယ့် ခြေလှမ်းသို့ နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ CRISPR technology လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာဟာ Gene Editing System ကို အသုံးပြုပါတယ်။